घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जर्मन फुटबल खेलाडीहरू बर्नड लियोन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामले चिनिन्छ "पेनाल्टी हत्यारा"। हाम्रो बर्नड लियोन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मिति सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रारम्भिक क्यामेरा जीवन, प्रसिद्धिको लागि सडक, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि हुन्छ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो संसारको उज्ज्वल गोलाकारहरूमध्ये छ। तर, केवल केहि विचार बर्नड लेनोको जीवनी जो एकदम रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
बर्नेड लियोनो4मार्च 1992 मा उनको आमाबाबुको जन्म भएको थियो; उनको आमा, रोसा लियोनो र बुबा, विक्टर लियोनो बिएटिहेम-बिसिङ, जर्मनी। बर्नड लियोनोको परिवार जर्मन-रुसी मूलको हो जुन उनको बुबा आधा जर्मन छ, आधा रु।
लेनो दक्षिण जर्मनीको सानो शहर बिएटिहेम-बिस्सेननमा आफ्नो भाइसँग भएको हुनाले जो स्टटगार्टको नजिकैको नजिक छ। बच्चाहरु को रूप मा लियोन को मान्छे को उनको एक धेरै ऊर्जावान केटा को रूप मा देखा। त्यस्ता ऊर्जाहरू खेलकुदमा चिनिएका थिए। खेलको कुरा गर्दै, बर्नड लियोनोको हरेक सदस्य फुटबलमा मन पराउँथे। लियोनले एक पटक राखे;
"फुटबल मेरो परिवारको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, मेरो भाइ र मेरो लागि यो हाम्रो जीवन थियो। हामी सधैं हाम्रो साथ बल राख्न को लागि फुटबल खेल्न चाहन्छौं। त्यसपछि, हरेक खिलौना फुटबल थियो। "
चाडपर्वको समयमा शुरुमा लियोनले स्थानीय खेल खेल्दा विशेष गरी "खराब पिच" ​​खेलिरहेका थिए जुन उनीसँग मित्र थिएन।6को उमेर मा, उनले क्यारियर उठाएर फुटबल को गम्भीरतापूर्वक लेने को निर्णय लिया।
तर, प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
लेनो आफ्नो युवा टोली एसवी जर्मियाया बिएटिहेम को रोस्स्टरमा नामांकन गरे जसले उनलाई आफ्नो क्यारियर को आधार बनायो। उनले एक मिडफिल्डरको रूपमा धकेल्न थालेका बेला उनी क्लबमा सामेल भए। पेशेवर बनने लीनो को दृष्टान्त केवल एक पास काल्पनिक कल्पना थिएन। यस्तो दृढताले उनलाई ठूलो अकादमीमा परीक्षण गर्ने प्रयास गर्यो।
11 उमेरमा, लेनो VFB स्टटगार्ट युवा टोलीमा सामेल हुन र परीक्षामा भाग लिन चयन गरियो। उहाँ 200 युवा खेलाडीहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो जुन ब्याचहरूमा परीक्षामा भाग लिन छोटो थियो।
सौभाग्य देखि, लेनो को6खेलाडीहरु मध्ये थियो, जो कि वेफ बी स्टटगार्ट द्वारा कोच को आश्वस्त गरे पछि चुनिंदा थिए। लेनो अझै पनि यस समय एक मिडफिल्डरको रूपमा जारी रह्यो।
उनी कसरी गोलकापर भए: एक जवान मिडफिल्डरको रूपमा, लेनोले धेरै ब्याक गरे पछि ब्याकलाइन र सबैभन्दा बढी अवस्थामा पनि गोलकीपर को रक्षा गर्न। यो उनले जेएनएमएक्सएक्स वर्षको उमेरसम्म गरे जबसम्म उनी उहाँलाई एक गोलकीपर बनाइदिए। संग साक्षात्कारमा शस्त्रागार एफसी, लेनो एक पल्ट उल्लेख गरे। तिनका शब्दहरूमा
"एक दिन मेरो गृहनगर क्लबबाट गोर्खा एक खेलमा आउन सकेन, यसैले कोचले सोधेको थियो कि गोर्खा बन्ने?
मैले तिनीहरूलाई भने, 'म प्रयास गर्न चाहन्छु'। मैले प्रयास गरे र सबैलाई मैले धेरै राम्रो थियो। त्यसपछि मेरो आमाबाबुले मलाई केही दस्ताहरू किन्नुभयो र म पछि लक्ष्य पोस्ट छोड्न चाहँदैनन्। "
लियोनले के गर्नु पर्ने थियो कि गोल्फइपीिंग को कार्य उनको मूर्ति थियो, पूर्व आर्सेल्यान्ड गोलकीपर, जेन्स लेहेमन भन्दा कुनै अन्य व्यक्ति।
यद्यपि एक जवानको रूपमा, लेनोले स्पेनिश र पूर्व रियल म्याड्रिड प्रतिमा बाट उनको नेतृत्व लिनुभयो Iker Casillas। यो स्टटगार्ट लियोनोमा भएको थियो जोस लेन्स लेहेमनलाई भेट्टाए जसको उनले धेरै भन्दा धेरै गोल गरे। त्यसबारे बोल्दै, उहाँले एक पटक भन्नुभयो शस्त्रागार प्रेस;
मैले उहाँलाई हेरेँ उनको धेरै धेरै प्रशिक्षण सत्रहरू र उनीहरूको साथमा केही प्रशिक्षण सत्रहरू हुँदा मैले 16 वा 17 वर्षको उमेरमा थिएँ। उहाँ धेरै केन्द्रित हुनुभयो, धेरै पेशेवर। त्यो मानसिकता हो जुन तपाईंलाई एक पेशेवर गोलकीपरको रूपमा आवश्यक छ।
पूर्व आर्सेल्यान्ड गोलकीपर, लेहमन अझै पनि VfB स्टटगार्टमा बनेका थिए जब लेनोले आफ्नो युवा क्यारियरलाई क्लबसँग गोल गरे। लेनोले आफैंलाई क्लबको वरिष्ठ पक्षमा पदोन्नति गरेपछि लेहमनको उत्तराधिकारीको रूपमा हेर्नुभयो। दुर्भाग्यवश प्रशंसकहरूको लागि, लेनोले दुई वर्ष पछि क्लबको साथ तेस्रो विभाजनमा खेलेका थिए। लेनो प्रदर्शनले बेयर लिभरकोसिनसँग बन्डस्लिल्का टिकट कमाई।
एक जर्मन तृतीय विभाजनबाट सबै भागको पहिलो मार्ग चुनौतीपूर्ण थियो र बर्नड लेनोको लागि एकैचोटि रोमाञ्चक थियो जुन यो समयमा मात्र 19 थियो। यो तथ्यले गर्दा चुनौतीपूर्ण थियो कि उनले चेल्सी विरुद्ध तीन हप्ताको क्लब भर्ना गरेपछि उनले आफ्नो च्याम्पियन्स लीग पहिलोपटक पहिलो गोल गरे। म्याचको समयमा, लेनोले चेल्सीको उत्कृष्ट स्ट्राइकर विरुद्ध अद्भुत प्रदर्शन देखाउनुभयो, Didier Drogba.
एक साक्षात्कारमा, लेनो एक पटक सम्झँदा;
खेल पछि, Petr उहाँले मलाई खुसी र मेरो लागि उत्साहित भन्नुभयो। उनी ती चीजहरू भन्न चाहँदैनन् तर मैले साँच्चै यसको सराहना गरेँ। त्यो सात वर्ष पहिले थियो र अब हामी शस्त्रागारमा सँगै छौं - यो पागल छ!
च्याम्पियन्स लीग म्याच पछि, यो बेयर लिभरकसिन बनिरहेको थियो एक गोलकापरमा एक नयाँ नायक भेटियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… त्यो चैंपियंस लीग म्याचले यूईएफ चैंपियन्स लीगमा खेल्ने सबै भन्दा सानो उमेरका लागि लियोन युरोपियन इनाम दिए। उहाँ केवल 19 वर्ष र 193 दिन हुनुहुन्थ्यो।
जेन्स लेहमनको प्रस्थान पछि, लेनो प्रभावशाली प्रदर्शन को स्ट्रिंग पछि पहिलो टोली मा नियमित रूप देखि बन्यो। उनी 2011 बाट 2018 सम्म XERUMX उपस्थिति बनाएर बेयर लिभरकुसेन संग रहन गए। चीजहरू ती सबै वर्षहरू एकदम राम्रो भए नराम्रो दिन!!
दबाव उहाँलाई प्राप्त गर्दै: सबैलाई थाहा थियो लियोनोले साह्रै साहसी भएको छ - यसको ढोका। तर कुनै पनि थाहा छैन कि अक्टोबर 2015 को समयमा यस खराब दिन मा उनको भयो जब त्यो सीजन को सबै भन्दा बुरा Bundesliga गोलकीपर ब्लड बनाइयो। बन्डस्लिला खेलमा Augsburg, लियोनले हानिकारक-हेर्ने पछाडीबाट पास पासबाट गुच्छालाई हरायो जोनाथन ताहि आफ्नै आफ्नै पछाडीमा। तल हेर्नुहोस् भिडियो;
लीनोका शब्दहरूले आक्रमण गरेपछि अचानक बोल्दै भन्यो;
"गोलकर्ताको रूपमा, तपाईं एक हुनुहुन्छ lone fighter। तपाईं अलग देखि प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ, तपाईलाई अलग पार्नुहोस्। तपाईं बस एक स्थानको लागि लड्न र यदि तपाईं केवल एक ठूलो गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाईं चाँडै बेवकूफ हुनुहुन्छ। "
यस समय, यो उनको प्रिय जर्मन क्लब आउनेछ लीनोको अन्तिम दिन स्पष्ट थियो। उहाँले सबैलाई छोड्ने अवसरको प्रतीक्षा गर्नु भयो। सौभाग्य देखि, 19th जुन, 2018, अंग्रेजी क्लब शस्त्रागार आफ्नो सेवा प्राप्त गर्नुभयो। यसले लेनोलाई आफ्नो पुरानो साथी पेट्र Čech लाई भेट्न मौका दिए।
भाग्यको रूपमा यो हुनेछ, लियोन गोलकापर बनेको थियो जसले अर्बेरियाको उत्कृष्ट गोलकापरलाई सफल बनाउनेछ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
बर्नड लेनो अगस्त 15 2015 देखि सोफी क्रिस्टिनसँग भएको छ, जुन उनीहरूको सालगिरह मनाउने मिति हो।
सोफी जो जर्मन र चेक वंशको जन्म भएको थियो 17th फेब्रुअरी 1997 (5 उनको मान्छे भन्दा सानो वर्ष) जर्मनी डसेलडोर्फमा। तिनी एक मार्केटिंग विद्यार्थी हुन् जसले केही समय मोडेललिंग पनि गर्छ। दुबै प्रेमिकाहरूलाई धेरै विदेशी स्थानहरूमा उनीहरूको बिदाको मजा लिइन्छ।
लामो समयसम्म सँगै रहन बावजूद, दुबै प्रेमीहरूले आफ्नो विवाहको लागि कुनै योजनाको निर्देशन गरेका छैनन्। तथापि, यो केवल विवाह को लागी दुई को लागी घिमिरे हुनु मात्र हो।
बर्नड लियोनोको व्यक्तिगत जीवन सहयोगी गोलकीपीलाई जान्नको लागी तपाईंलाई उनको बारेमा पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरू गर्दै, उहाँ एक रोमन क्याथोलिक हुनुहुन्छ। लेनोले एक पटक एक सेन्ट पीटरको बासिलालाई भेट्न प्रयास गरेको छ, रोमको वेटिकन पोप फ्रान्सिससँग "एक विशेष क्षण" को लागी गरे।
एक असली फीफा गेमर: उनको शस्त्रागार टोलीमा हेक्टर बेलरिन र रोब होल्डिंग शूटर खेल खेल्नेछ; कल को ड्यूटी, बर्नड लेनो जस्तै जुआन Foyth बल्कि फीफा संग रहछन।
कैसीिलसका लागि लेनोको सम्मान फीफा गेमिंग सीरीजमा उनको छनौट टोलीमा प्रतिबिम्बित भएको थियो। त्यसबारे बोल्दै, उहाँले एक पटक भन्नुभयो ...
"म सधैँ प्लेस्टेशनमा रियल म्याड्रिडको रूपमा खेल्न चाहन्छु" उसले भन्यो. "क्यासिलस त्यो ठूलो कारण थियो"।
तर, अनल्ट क्यारियर तथ्यहरू
उनले आफ्नो उपनाम कसरी पाए- "दंड खूनी ": हुनत लेनो ज्यान्स लेहमन र धेरै धेरै सिके Iker Casillas, तर उहाँले वास्तवमा यी दुई गोलाकारहरू केही सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो "दण्डको बचत" को कार्य हो जुन उनले आफ्नो प्रिय उपनाम दिए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… पूर्व टीउनले लेभरस्कुसेन दस्तानेम्यानलाई एकपटक रोक्न रोकिएको थियो भने युनिभर्सिटी स्पेस-किन्क्समा आउट भए पनि एक्सएनएक्सएक्स / एक्सएनएमएक्समा पनि पाँचवटा दण्ड रोकियो। उहाँले वास्तवमा चार पङ्क्ति सुरक्षित गर्नुभयो। लेखनको समयको रूपमा, कुनै गोलकुपर जिन्दगी (सक्रिय र सेतोड्रेड) ले विश्व रेकर्डलाई हराएको छ।
धीरज: लियोनोले आधुनिक आधुनिक गोलकीपरको विपरीत धेरै सहनशीलता पाएको छ। उनले एक चोटि पोष्ट पोष्ट नाकको साथ सुरक्षित राखे र उनीहरूलाई बल लिने बोलीमा आफ्ना विरोधीहरूको चार्ज गर्न कहिल्यै डराउँदैनन्।
यो विरुद्ध एक चैंपियन्स लीगको अन्तिम 16 गेममा भयो डिएगो सिमीनएटलेटिको मैड्रिड।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो बर्नेड लियोन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
इमानुएल इब्यु बालिका स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: २ 27 अगस्ट, २०१।